ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 25/10/10
သဘာဝပိုဇိုလန်ဆိုတာ မီးတောင်ပေါက်ကွဲရာက ထွက်ရှိလာတဲ့ ချော်ပြာတွေပါ။ မီးတောင်ပေါက်ကွဲတဲ့အခါ ချော်ရည်ပူတွေ ပြာတွေ တိုးထွက်လာတယ်. အပြင်လေနှင့် ထိတွေ့သောအခါ အပူချိန်လျော့ အေးခဲသွား ပါတယ်။ အဲဒီ ချော်ပြာတွေဟာ ဘီလပ်မြေ နဲ့ တူတဲ့ အာနိသင်ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ ဘိလပ်မြေနဲ့ တူနေမှတော့ ဘီလပ်မြေ ဘယ်လုပ်တော့မလဲ. ပုပ္ပါးကို မောင်ပိုင်ဆီးလိုက်မှာပေါ့ .. အဟဲ အဲဒါက စီးပွားရေး လဒ်မြင်တဲ့ တနပ်စားကြံတဲ့ ချစ်တီးအတွေးပါ။
အဘိုးတို့ အဘရဲ့ ဘိုးဘိုး အိမ်ဆောက်တုန်းက ဘီလပ်မြေ မပေါ်သေးဘူး။ ဘိလပ်မြေနဲ့တူတဲ့ မြေနီမှုန့်တွေနဲ့ ဆောက်တယ်။ အိမ်ခေါင်မိုးတယ် လို့ သက်ကြီးစကား သက်ငယ်ကြား သိဖူးပါတယ်။ အဘိုးဟာ အဲဒီအိမ်အပေါ်ထပ်မှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ ချော်ပြာနဲ့ဆောက်တာ မဟုတ်သေးဘူး မြေနီမှုန်တောင် အိပ်က အဲလောက် ထိတောင် မပျက်မဆီး တည်နေနိုင်တယ်ဗျ။ မီးတောင်ချော်ပြာက ဘိလပ်မြေ ထုတ်တဲ့သူတွေ မျက်စိကျစရာ ဖြစ်တာ ဘာဆန်းတာလိုက်လို့..
ပိုဇိုလန်ကို သဘာဝ မီးတောင်တွေကလဲ ရတယ်၊ သိပ္ပံနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လို့လဲရတယ် လို့ သိရပါတယ်။ သဘာဝက ရှိနေမှတော့ နည်းပညာနဲ့ တမင်ဘယ်ထုတ်မလဲနော်။ မီးတောင်ဟောင်းတွေ လိုက်တူးပီး ရောင်းစားမှာပေါ့။ (အဲလို မစဉ်းစားနဲ့လို့ ပြောချင်တာပါ)။ ကျွန်တော် အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သဘာဝတရားကိုတော့ ခံစားတတ်တယ်။ သဘာဝဟာ သဘာဝပါ။
၂၆.၁၂.၂၀၀၈ ရက်နေ့ထုတ် မြန့်မာ့အလင်း သတင်းစာ။
မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအချို့ရှိ မီးတောင်ဟောင်းများသည် သဘာဝပိုဇိုလန်ထုတ်လုပ်နိုင်သော အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်ကြသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ဘီစီ ၄၄၂ တွင် နောက်ဆုံး ပေါက်ကွဲခဲ့သည်ဟု မှတ်တမ်းရှိခဲ့သော ပုပ္ပားမီးငြိမ်းတောင် ဒေသတစ်ဝိုက်နှင့် နောက်ဆုံးပေါက်ကွဲချိန် မှတ်တမ်းမရှိသော ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်း အောက်ပိုင်းဒေသမှ မီးတောင်ဒေသအုပ်စုတို့မှာ သဘာဝပိုဇိုလန်ထုတ်ယူရန် အလားအလာကောင်းသော ဒေသများဖြစ်ကြသည်။ ပုပ္ပား မီးငြိမ်းတောင် ဒေသတစ်ဝိုက်ရှိ သဘာဝပိုဇိုလန်သည် အရည်အသွေးမီ မြင့်မားကြောင်း စမ်းသပ်တွေ့ရှိရ၍ ရဲရွာရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၌ တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် Roller Compacted Concerete Dam တွင် ဘိလပ်မြေလိုအပ်ချက်၏ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ အစားထိုး သုံးစွဲလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပိုဇိုလန် အသုံးဝင်ပုံနဲ့ အသုံးပြုပုံ အများသိစေစိမ့်သောငှာ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ.. :(
DatE Monday, October 25, 2010 LaveL Pozzolan, မီးတောင်, ချော်ပြာ0comments link this
ဆောင်းဆိုအေး၊ နွေဆိုပူ၊ မိုးဆိုမိုး
သဘာဝက ခန်းနားစွာ နေရာချပေးခဲ့ပြီ။
စိမ့်ကြီး မြိုင်ကြီး ပုပ္ပါးတောင်ကြီးနဲ့
စုံတော မြိုင်တော ရှုမောဖွယ်တွေကြောင့်
ထန်းပင် ထန်းလက် ထန်းလျှက်တွေနဲ့
ကျောက်ပန်းတောင်းဟေ့ ဆိုရင် ချိုအီပြစ် ခွေယိုင်လဲ။
အစဉ်အလာအရ ရုပ်ခန္တာဖြစ်တည်မှုမှာ တည်တန့်
ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ ချစ်ခြင်းတွေနဲ့ နေထိုင်ရင်း
တောင်တော်ပုပ္ပါးက ပီအိပ်ခ်ျ ဆဲဗင်း ကိုသောက်လို့
မျိုးရိုးဗီဇ နဲ့ လူသားတွေ အဖြစ် ကမ္ဘာက သိကြတယ်။
အခြေနေအရ ကိုယ့်ဒေသနဲ့ ဝေးနေပေမယ့်
ငါဟဲ့ ကျောက်ပန်းတောင်းသား ဘိုးဘွားအမွေဆက်ခံလို့
ကောင်းသတင်းနဲ့ကျော်ဇောစေရမယ်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒရှိသူတွေ ထုနဲ့ဒေး။
တို့ပြေ တို့မြေ ကျောက်ပန်းတောင်းမြေသို့
အနီးကပ် ချစ်ခွင့်ရသူများ အဝေးက ချစ်နေကြသူများ နဲ့
ကမ္ဘာတည်သရွေ့ အိုအေစစ်တည်နေအောင် ထိန်းသိမ်းကြစို့လေ။
DatE Monday, October 25, 2010 LaveL ကဗျာ စာစု0comments link this
ယနေ့ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာန) ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်က ဦးအောင်သိန်း(ရ...
မတွေ့ရတာ ကြာပီဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂ်က ဘော်ဘော် တွေအတွက် ပုပ္ပါးမြေက စကားဝါပန်း လက်ဆောင်...
မဟာသက္ကရာဇ် ၊ သာသနာ သက္ကရာဇ်၊ ကောဇာ သက္ကရာဇ် ။
သမိုင်း မှတ်တမ်း ။ မြတ်စွာဘုရားခေတ် (ဘီစီ ၆၀၀ ဘီစီ ၁၀၀) ပျူမြို့ပြ နိုင်ငံများ (ဘီစီ ၁၀၀ - အေဒီ ၈၄၀) မွန်တိုင်းပြည်များ (အေဒီ ၉၀၀ - အေဒီ ၁၁၀...
အန္တရာယ်များသည့် gas carrier ship.
ဒီလိုသဘောင်္တွေပြင်ရတာ..အသက်အန္တရယ်ရှိတယ်..အခန့်မသင့်ရင် အသက်အန္တရာယ်ပါ ကြုံရတတ်ပါတယ်။
ဧရာဝတီ မြစ်တလျှောက် မြို့ရွာများ။
မိတ္ထီလာကန်ကြောင့် မိတ္တီလာမြို့နေလူထု ကောင်းကျိုးခံစားရပါတယ်။ မိတ္တီလာကန်ကို ရေနေစေဖို့ ဆည်ဖို့ကြတယ် ထိန်းသိမ်း လို့ သိရတယ်။ အင်းလေးကန်ကြောင့်...